हाम्रो जीवनमा, एक विशेष ठाउँ नम्बरहरू द्वारा कब्जा गरिएको छ जसको जादुई प्राचीन समयका कारणले मानिसहरूलाई बाकी छैन। धेरै मानिसहरू आफ्नो उत्पत्ति र मानिसमा प्रभाव पार्छन्। आश्चर्यजनक कुरा होइन, किनकि हामी संख्याहरू पूरा गर्न प्रत्येक चरणमा छौं। उनीहरू जन्मदेखि मृत्युसम्म छन्। अंकहरू बिना, हामी अब हाम्रो जीवनलाई कल्पना गर्न सक्दैनौं। हामी तपाईंलाई उनीहरूको जादू के हो भन्ने पत्ता लगाउन सुझाव दिन्छौं।
नम्बरहरू एक विशाल संख्या हो, जस्तै तिनीहरूसँग सम्बन्धित अस्तित्वहरू। एक व्यक्ति जो जादूबाट टाढा छ र जसले चिन्हमा विश्वास गर्दैन भने पनि उनीहरूको कंधेमा तीन चोटि चोटी वा तीन पटक टेबलमा दस्तक बनाउँदैन "क्रमशः"। र अंकहरु को आकर्षित गर्न को संख्या को जादू आज विशेष रूप देखि लोकप्रिय हुन्छ।
संख्याहरूको बारेमा अभिव्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व
हामीमध्ये धेरैसँग हाम्रो आफ्नै मनपर्ने संख्या छ, र हामी विश्वास गर्छौं कि यसले निश्चित रूपमा भाग्य ल्याउँछ। आधुनिक अन्धविश्वासहरू मानव जातिको पुरातन विचारहरूको आक्रोश हुन् जसले रहस्यमय शक्तिको बारेमा संख्यालाई स्वीकृत गर्दछ। एक लामो समयमा त्यहाँ जनहरू थिए, जसको खाता दुई वा तीनको लागि रोकियो। यी तथ्याङ्कहरू पार गर्नुभएका सबै कुरा "अन्धकार", वा "धेरै" शब्दद्वारा प्रमाणित गरिएको थियो। कुन गणना गर्न सकिएन भने बुझ्यो भन्दा बाहिर। यसकारण, यो रहस्यमय थियो। मानिसहरूले यसलाई पवित्र र विभिन्न अलौकिक गुणहरू संग स्वीकृत गरे। त्यस्ता संख्याहरु को प्राचीन जादू थियो।
संख्या विज्ञानको उद्भव
केहि समयपछि, मानिसजातिले संख्यात्मक आविष्कार गरे। यसको जराहरू पुरातनतामा जान्छ, किनकि आदिवासी जनहरूले पनि संख्याहरू प्रयोग गरे। मानिसहरू अझै पनि संख्यात्मक रूपमा पछ्याउँदै छन्, होशियार वा होइन। उदाहरणको लागि, एक गुच्छामा रंगहरूको संख्या जरूरी अजीब हुनुपर्दछ, अन्यथा तपाई गलत छ। अध्ययन सामग्री तीन चोटि दोहोर्याउनुहोस्, र सेवा6वा 12 व्यक्तिको लागि हो। अन्धविश्वासहरूको बहुतायतमा, अंकहरूको जादू प्रतिबिम्बित हुन्छ। उदाहरणको लागि, धेरै देशहरूमा त्यहाँ उडान संख्याको साथ कुनै विमान छैन। होटेलमा पनि तिनीहरू 13 औं नम्बरबाट बच्न रुचाउँछन्, र घरहरूमा त्यहाँ कुनै फ्लोर नम्बर 13 हुन सक्दैन। अर्को उदाहरण हाम्रो समयमा धेरै लोकप्रिय जन्मको संख्याको जादू हो।
पुरातन समय मा संख्यात्मक ज्ञान एक गुप्त ज्ञान थियो, जो राज्य को सबै भन्दा शिक्षित कुलीन हो। यो भारतीय ब्राह्मण, अश्शूरी मरे, मिस्रका पूजाहारीहरूले अध्ययन गरे । पुरातन मेम्फिसका पूजाहारीहरूले विश्वास र कलाको संख्या दुईवटा कुञ्जीहरू हुन् जुन ब्रह्माका सबै ढोकाहरू मानिसलाई खुल्ला हुन्छन्। पुरातन युनानमा, संख्याहरू पनि विशेष पूजाको वरिपरि घिमिरे थिए।
पाइथागोरस र पाइथागोरियन विद्यालय
छठे शताब्दी ईसा पूर्वमा। ई। आधुनिक पश्चिमी अंकगणनाको मुख्य प्रावधानहरु विकसित गरियो। यो योग्यता पाइथागोरस, ग्रीक गणितज्ञ र दार्शनिक छ। उहाँले फ्यानिशिसन, ड्रुइड्स, अरब र मिस्रिकाहरूको गणितीय आधारहरू प्रणालीमा संयोजन गर्नुभयो, उनीहरूलाई मानव प्रकृतिको विज्ञानको साथ संयोजन गर्ने त्यो समय अस्तित्वमा थियो। पाइथागोरस555ई.पू.को जन्म भएको थियो। ई। उनले क्यालेडा, मिश्र र अन्य देशहरूमा धेरै यात्रा गरे। घर फर्काउँदा पाइथागोरसले दक्षिणी इटालीमा विशेष दार्शनिक समाज स्थापना गरे। यसमा, पाइथागोरियन विद्यालयको रूपमा चिनिन्छ, विभिन्न विज्ञानहरू अध्ययन गरिएका थिए। तिनीहरू बीच एक विशेष ठाउँ गणित, खगोल विज्ञान र ज्यामिति द्वारा कब्जा गरिएको थियो। यस समाजका सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण खोजहरू गरे।
पाइथागोरस को संख्या को जादू
पाइथागोरसले दावी गरेका छन् कि संख्याहरू संसारमा शासन गर्छन्। उनको समर्थकहरूले विश्वास गरे कि उनीहरूको आफ्नै विशेष रहस्यमयी जीवन बिताए। हरेक वस्तुको लागि, पाइथागोरियनहरूले सोचेको रूपमा, त्यहाँ निश्चित रूपमा एक वा अन्य नम्बर हो। तिनीहरू आत्माको जस्तै, मानिसहरूलाई खुशी, असुविधा ल्याउन, राम्रो र खराब। संख्याहरूको जादू एक व्यक्तिलाई मदत गर्न र हानि गर्न सक्षम छ। यो केवल जान्न आवश्यक छ कुन तथ्याङ्क राम्रो छन् र यो खराब हो।
भाग्यको साथ संख्याको सम्बन्ध
प्राचीन विचारक पाइथागुरासले यस रहस्यमय विज्ञानलाई आफ्ना चेलाहरूलाई बुझाउँछन्, त्यस मानिसले आफ्नो भाग्यलाई पराजित गर्दछ, जहाँसम्म त्यो संख्याको जादूको साथ परिचित छ। पाइथ्यागोरियनहरूले एकाई भन्दा बढी इकाई सेट गरे। उनीहरूले विश्वास गरे कि सारा संसार यसको पछि लागे। उनीहरूको प्रतिनिधित्वमा इकाई अवस्थित सबै चीजहरूको सुरुवात थियो, देवता, ब्रह्मांड। जुम्लाको विवाह, प्रेम। एकै समयमा, यो साम्राज्य को एक प्रतीक हो। ट्रय संग, पाइथागोरियनहरूले पूर्णता पत्ता लगाए। यो उनीहरूको असामान्य चित्र जस्तो देखिन्छ, किनकि यो दुई अघिल्लो को योगबाट प्राप्त हुन्छ। छठे संख्यालाई पनि राम्ररी बुझाइन्थ्यो। सबै पछि, यो गुणा बढावा वा सबै संख्याहरू थप्नु भएको छ जुन यसमा विभाजित हुन्छ। वास्तवमा,6नम्बर विभाजित 1,2र3मा विभाजित हुन्छ र जब तिनी थप्नु वा गुणा गर्दा हामी फेरि प्राप्त गर्छौं 6। यो एउटा अनुपयुक्त सम्पत्ति हो जुन केवल छ छ। र हाम्रो समयमा, पाइथागोरस संख्याहरूको जादुई सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिन्छ । जन्मको मिति अनुसार संख्यात्मक, उदाहरणको लागि, यसमा निर्भर गर्दछ। पाइथागोरसले संख्या कम गर्नका लागि विशेष प्रविधि विकास गरे र उनलाई संख्यामा ल्याए। छोटो वर्णनको यसको वर्णन के गरौं।
पाइथागोरस को थ्योरी
यो विचारक, साथै उहाँका अनुयायीहरू र विद्यार्थीहरू, संख्यामा सबै उपलब्ध संख्याहरू घटाउनुभयो, जुन 1 देखि9समावेशी हुन्छ। तिनीहरूले विश्वास गरे कि यो प्रारम्भिक संख्या हो। सबै अन्य तिनीहरूलाई प्राप्त गरिन्छ। आज हामी भन्न सक्छौं कि यो यो विश्वसनीय छैन, किनभने, बाइनरी प्रणालीमा मात्र त्यस्ता अंकहरू छन्, र 15 हेक्साडेसिमलममा।
पाइन्टगोरियनले ठूला संख्यालाई कम गर्न को लागी विभिन्न प्रणालीको विकास गर्न विभिन्न प्रणालीहरू विकास गरेका थिए। सबैभन्दा लोकप्रिय र सरल तरिकाले दिइएको नम्बरको सबै अंक थप्न हो। त्यसपछि, यदि तपाइँ 10 वा बढी छ भने, तपाईंले यी नम्बरहरू पनि थप गर्न आवश्यक छ। यो प्रक्रिया जारी राख्न आवश्यक छ जब सम्म एक प्राथमिक नम्बर बनी रहन्छ। यो ध्यान दिइन्छ कि गणनाको केहि भिन्नतामा संख्याहरू 11 र 22 लाई प्रभावकारी मानिन्छ। तिनीहरू आंकडामा देखाइएनन्।
जन्मेको मिति र पाइथागोरियन संख्याहरूको जादू सम्बन्धित अंकहरू। उपरोक्त "विश्लेषण" विधिहरू केवल यसको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर कुनैपनि संख्याका लागि पनि। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन् जहाँ संख्याको जादू लागू हुन्छ। जन्म मिति, अपार्टमेन्ट नम्बर, फोन नम्बर, इत्यादि - सबै कुरा विश्लेषणको अधीनमा हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, तपाईं अंकलोजीको दृष्टिकोणबाट शब्दहरूको अर्थ जान्न सक्नुहुन्छ।
शब्दहरूको संख्यात्मक विश्लेषण
यसको सहयोगको साथ तपाईं पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, विशेष गरी, यो यो वा त्यो नाम आफैमा छ। सबै पछि, नामले अन्य व्यक्तिबाट व्यक्तिलाई अलग गर्दछ। यो विश्वासको आधार हो जुन यसले व्यक्तिको व्यक्तिगततालाई समायोजन गर्दछ। विश्लेषणको सहयोगमा यसको भाग्य र चरित्र प्रकट गर्न सम्भव छ। यसका लागि, संख्यात्मक विशेषज्ञहरूले विशेष टेबलहरू बनाउँछन्, जसमा एक निश्चित नम्बर जन्मदिन र नामको प्रत्येक अक्षरसँग मेल खान्छ। थप संख्याहरू द्वारा प्राप्त गरिएको रकम एक अंकमा घटाइएको छ। यो नामको सार हो। अर्को शब्दमा, व्यक्ति "संख्या" को अक्षर वा अन्य गुणहरूलाई "मेल खान्छ", नम्बरमा संलग्न। उहाँ आफ्नो भाग्यले पनि निर्धारित हुन्छ।
म अंकल मा भरोसा गर्न सक्छु
निस्सन्देह, संख्याको जादू, जन्म मिति, नामको रहस्य, कुरो, इत्यादि आदि गतिविधिहरू, चरित्र र आफूलाई आफैले र उनीहरूको क्षमता जान्ने व्यक्तिको भाग्यलाई प्रभाव पार्न सक्षम छैनन्। तथापि, अनौठो व्यक्तिहरूमा यी कारकहरूले थप भावनाहरू ढाल्छन्। एक पटकमा यी भावनाले व्यक्तिलाई बलियो र ऊर्जा थप्दछ, आत्मविश्वास दिनुहोस्, आनन्द लिनुहोस्। अर्कोमा, संख्याको जादूले डर, असुरक्षाको कारणले गर्दा इच्छालाई रोक्छ। मान्छे भाग्य मा विश्वास गर्न, आफ्नो क्षमताहरु मा शक गर्न शुरु। केहि पनि गम्भीर छ कि पैसा आकर्षित गर्न को लागी संख्या को एक जादू छ। जस्तो कि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, केहि व्यक्ति संख्यात्मक बारेमा धेरै गम्भीर छ।
हामी तपाईंलाई संख्या 3,7र 13 को विस्तृत विवरण प्रदान गर्दछौं। यसको साथ परिचित भएपछि, तपाईं सिक्न सक्नुहुनेछ कि तिनीहरूका साथ कति रोचक चीजहरू जडित छन्।
उनको वरिपरी थुप्रै अन्धाहरू छन्। उनीहरूको समयले हाम्रा पुर्खाहरूले तीन गुनासो गरेनन् भनेर संकेत गर्दछ। तपाईलाई सम्झँदा, अभिवागीहरूको संख्याको आफ्नै जादू थियो। संख्यात्मकता र धर्मले हाम्रा पुर्खाहरूबाट धेरै उधारेको छ। धेरै धर्महरूमा तीनौं पवित्र छ। पुरातन संसारमा पनि तीन-अनुहार थियो, पौराणिक कथा (3 ग्रित्स, एरिनिया, गोरखाहरू, पर्वतहरू) मा3महिला पात्रहरू थिए। बौद्ध धर्म मा संज्ञानात्मक समझ को तीन गुना (त्रििकाया) को रूप मा मानिन्छ। यसबाहेक, त्यहाँ एक ट्रिटार्क हो - तीन गहनाको प्रतीक, साथै त्रिभुकना - बौद्ध धर्मको3चिन्हहरू।
ईसाई धर्म र लोकगीत मा तीन
ईसाई धर्ममा संख्याहरूको जादू हो। यस सन्दर्भमा संख्यात्मकता र धर्म सामान्यमा धेरै छन्, यद्यपि उत्तीर्ण पूर्व पहिचान गर्दैन। ईसाई धर्ममा, उदाहरणका लागि, ट्रिनिटीको विचार हो। त्यहाँ एक देवता हो जसले तीन रूपहरू (व्यक्तिहरू) मा कार्य गर्दछ। यो, तपाईंलाई जान्दछ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। लगभग सबै चर्च अनुष्ठान र अनुष्ठानहरु ट्रिपल प्रयोग गरेर गरिन्छ। उदाहरण एक औंलाको तीन-औँला तह हो, जुन चिन्हको साथ गरिन्छ। बप्तिस्मामा, तीन पटक विसर्जन हुन्छ। सभा र विभाजनमा, ट्रिपल चुम्बन स्वीकार गरिएको छ। आत्मा मर्नुअघि तेस्रो दिनमा मानव शरीरलाई छोड्छ। त्यहाँ अन्य उदाहरणहरू छन्। लोकगीतमा, नम्बर3सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो। नायकले3कार्यहरू प्रदर्शन गर्नुपर्दछ, राजासँग3छोरीहरू छन्, सांपले तीनवटा टाउको र यति नै छ।
यस नम्बरको प्राचीन समयदेखि नै जादुई गुणहरू संग गरिन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले यो आसपासको संसारका थुप्रै घटनाको प्रतिबिंब देखेका थिए। उदाहरणको लागि, पुरातन बाबुलमा यो विश्वास भएको थियो कि आकाशमा पृथ्वीको हिसाबले7हिँड्ने ग्रहहरू छन्। यी ग्रहहरू: सूर्य, मंगल, चन्द्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शनि। पुरातन बेबिलोनहरूले तिनीहरूलाई धोका दिए। उनीहरूले विश्वास गर्छन् कि ती सात देवताहरू जसले बस्छन् मानिसहरूलाई र व्यक्तिहरूको भनाई नियन्त्रण गर्छन्।
जाडो,7दिनको हप्ताको उत्पत्ति यी दिव्य निकायहरूको संख्यासँग सम्बन्धित छ। चूंकि चन्द्रमा 28 दिनमा दिन आकाशमा देखिनेछ, यो अवधि4चरणहरूमा विभाजित हुन्छ जुन7दिन समावेश गर्दछ। अरबहरूका लागि, यहूदीहरू, अश्शूरीहरू सातहरू शपथ थिए। फ्रांसीसी भ्वाइसको शपजस्तै: "सातको रूपमा बलियो" बाइबलमा यो संख्या पनि हुन्छ। हाम्रो संसार सात दिन भित्र बनाइएको थियो, त्यहाँ सात घातक पापहरू र सात पवित्रहरू पनि छन्। केम्यामीमा लामो समयको लागि केवल7धातुहरू पहिचान भए।
अंकको अर्थमा सात को अर्थ
अंकको अर्थ सात के अर्थको बारेमा के भन्छ? यो आकृति रहस्य को प्रतीक हुन्छ, अदृश्य र अज्ञात को अध्ययन। ज्योतिषीहरूले विश्वास गर्छन् कि7एउटा सही संख्या हो। यो छ छ को एकता को एकता पूर्णता संग र यसको आफ्नै समेटिरी छ, जो यो साँच्चै एक मानसिक संख्या बनाउँछ।
सात भाग्य को आंकडा हो। धेरै व्यक्तिहरूले यसको साथमा सङ्ख्याको जादूसंग जोड्छन्। पैसा, माया, दीर्घकालीनता - सबैले यो चिन्ताको प्रतिज्ञा गरेका छन्। यसलाई सबै भन्दा पवित्र र जादुई संख्या मानिएको छ जुन गोप्य ज्ञान, पवित्रता र बुद्धिको अनुभूति गर्दछ। र संख्याको जादूले हामीलाई जन्म मितिको बारेमा के भन्छ? सात मानव व्यक्तित्व को यस गुण को अनुसार आत्मा को आत्मा र लगनशीलता, विकसित अंतर्निहित, एक विश्लेषणात्मक, एक समृद्ध कल्पना को लागी एक सोच र एक जीवित कल्पना को प्रवृत्ति को रूप मा। सात छ जसमा सङ्गीतकारहरू र कविहरू, विचारकर्ताहरू र दार्शनिकहरू जन्मिएका छन्। यो एक व्यक्ति को क्षमता, विज्ञान, दर्शन र कला को दुनिया को आफ्नो प्रतिभा को धार्मिक गतिविधिहरु को लागी विशेषता को विशेषता हो। हामी भन्न सक्छौं कि यो सबैभन्दा रहस्यमय संख्या हो। मानिन्छ कि यसको मालिकहरू प्रतिभाशाली, उत्सुक र भावुक हुन्छन्। तिनीहरू आविष्कार गर्छन्, र हास्यको राम्रो अर्थ पनि छन्।
यो कमबख्त दर्जनको रूपमा चिनिन्छ, र अंग्रेजीले यसलाई दर्जन बेकरहरू भन्छ। यो रोचक नामको आफ्नै इतिहास हो। तथ्य यो तथ्य हो कि मध्य युगहरूमा बेकरहरूले दण्डको डरलाग्दो डरलाग्दो डरलाग्दो थियो, जुन त्यस समयमा ग्राहकहरूको धोखाधडीको लागि थियो (हातको काटनबाट पनि पुग्यो)। त्यसोभए, तिनीहरूले गल्तीमा गलतको डरमा हरेक दर्जन थप बन्सहरू थपे।
हामीले पहिले नै उल्लेख गरेका छौं, आज यूरोपको धेरै शहरहरूमा कुनै अपार्टमेन्ट, फ्लोर, घरहरू 13 नम्बर अन्तर्गत छन्। यो पनि सम्झँदा पनि बसहरू र विमानहरूमा सीटहरू सङ्ख्यामा, रेलगाडी वागनहरू र अडिटोरियमहरूमा। यो मानिन्छ कि यसले मानिसहरूका लागि दुर्भाग्य दिन्छ।
संख्या 13 को डर
एक प्राचीन विश्वास अनुसार, 13 एक कमबख्त दर्जन हो। यसैले, यो मानिन्छ कि यो राम्रो तरिकाले बोड गर्दैन। विशेष गरी यदि यो नम्बर शुक्रबार शुक्रबार हुन्छ - त्यसपछि निश्चित रूपमा समस्याको लागि पर्खनुहोस्। तपाईंलाई थाहा छ, सोमबार एक कठिन दिन मानिन्छ। यद्यपि, शुक्रवार पनि, धेरै जना मानिसहरूले विशेष गर्दैनन्। यस दिन, अज्ञात सेनाले मानिसलाई धेरै समस्या ल्याउन सक्छ, किनकि 13 र शुक्रबारको बिचमा सबै भन्दा खराब सबैभन्दा खराब हुन्छ जब संयुक्त हुन्छ। त्यसकारण, यो बिरामीको दिन "शैतानको दिन" मानिन्छ। शुक्रवार को डर 13 औं पनि friggatriscaidekafobia, वा paraskavedecatriaphobia को लागि एक विशेष हिसाब-शब्द शब्द भनिन्छ।
र यो एक अंशांकन वा मजाक होइन। उदाहरणका लागि, एक ठोस संस्करणमा, अर्थात् ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा, यो उल्लेख गरिएको थियो कि शुक्रबारका सर्जनहरू, विशेष गरी तेरहवेंौंमा सर्जनहरू, नियन्त्रित अपरेसनहरू गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। तिनीहरू जान्छन् कि यस दिनमा विफलताको दुरुपयोग डबल्स! आधिकारिक औषधिले अहिलेसम्म यो घटनाको अध्ययन अध्ययन गरेको छ, तर यो अवस्थित छ।
यो भनिएको छ कि त्यस्ता पूर्वाग्रहहरू मात्र संक्रामक मनले मानिसहरु द्वारा मात्र होइन, तर यो पनि जीनियसहरु द्वारा। उदाहरणका लागि, गोतेले शुक्रवार 13 औं शताब्दीमा बिताउने प्रयास गरे। बिस्मार्कले दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेनन्, र नेपोलियनले युद्धबाट बचाउ गरे। सन् 1913 मा लेखक जी डी 'अन्नाजियोले सबैका पत्रहरू 1912 + 1 मा लेखे।
संख्या 13 को भय कसरी हराउने?
नम्बर 13 को डर धेरै सामान्य छ। त्यसोभए उनी न्यूरेसिसको वर्गीकरणमा सूचीबद्ध गरिएको थियो जसले ट्रिस्सेफे-फोबियाको रूपमा। केही रिपोर्टहरूमा, संयुक्त राज्यमा यो डर 17 देखि 21 मिलियन व्यक्तिको विषय हो। लक्षणहरू लक्षणहरू हल्का चिन्ताबाट वास्तविक डरलाग्दो हुन्छ। यस नम्बरको प्रभावको मुनि धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूको तालिका वा व्यापार निर्णय परिवर्तन गर्छन्। प्रायः उनीहरूले यस्तो अविस्मरणीय दिन काम गर्न इन्कार गरे।
यो फोबियाको लागि एक धेरै सरल उपाय छ। तपाईंले आफ्नो ध्यान ध्यान दिनका लागि सुखद चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। विफलतामा ध्यान नगर्नुहोस्। लोकगीतमा विभिन्न व्यक्तिहरूले अन्य औषधि खोज्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, तपाईं पर्वतको माथिल्लो तिर (तपाइँ स्किस्क्रैपर गर्न सक्नुहुनेछ) मा चढ्न आवश्यक छ, र त्यसपछि यहाँ सबै होली मोजेहरू जलाउनुहोस्। तपाईं टाउकोमा खसेको खण्ड पनि खानु सक्नुहुन्छ। तपाईंको लागि कसरी कार्य गर्ने - आफैलाई निर्णय गर्नुहोस्।
संख्याको अर्थ, तिनीहरूका जादू - यो सबै धेरै रोचक छ, यद्यपि अस्पष्ट। यस लेखमा हामीले संख्यात्मकताका केहि पहलुहरूमा छुट्यौं। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले जानकारी मनपर्ने जानकारी पाउनुभयो।
मनोवैज्ञानिक भेडा ग्रिगोरभिच मेसेजिङ्ग: जीवनी, जीवनका रोचक तथ्यहरू, फोटो
कोला (फूल)। उपहारको मूल्य
Hurghada होटल Hurghada Marriott लाल समुद्र Resort 5: * समीक्षा, वर्णन र समीक्षा